Vaovao - Ahoana no fomba hamokarana andriamby Neodymium Sintered?
Andriamby NdFeB voafafadia andriamby firaka vita amin'nyNd, Fe, B ary singa metaly hafa. Miaraka amin'ny magnetisma matanjaka indrindra, herim-pamoretana tsara. Ampiasaina be amin'ny motera kely, mpamokatra rivotra, metatra, sensor, mpandahateny, rafitra fampiatoana andriamby, milina fandefasana andriamby ary fampiharana indostrialy hafa. Tena mora simba amin'ny tontolo mando, noho izany ilaina ny fanaovana ny fitsaboana amin'ny tany mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa. Azontsika atao ny manolotra ny palitao, toy ny Zinc, Nickel, Nickel-copper-nickel, Silver, plating volamena, epoxy coating, sns Kilasy: N35-N52, N35M-48M, N33H-N44H, N30SH-N42SH, N28UH-N38UH, N28EH-N35EH
Ny filaharan'ny fanamboarana andriamby neodymium amin'ny sintera
Ireo akora matevina sy metaly hafa dia miharihary amin'ny hafanana antonony ary miempo ao anaty lafaoro fampidirana.
Aorian'ny fahavitan'ny dingana dingana samihafa, ny ingot dia namboarina ho sombintsombiny izay microns maro ny habeny. Mba hisorohana ny fitrandrahana oksidana, ireo zana-pitrandrahana kely dia arovan'ny azota.
Ny sombin-tsolika dia apetraka ao anaty jig ary apetrany ny sahan'andriamby raha apetaka amin'ny endriny voalohany ireo andriamby. Aorian'ny famolavolana voalohany, ny fanindriana isostatika menaka dia handeha lavitra kokoa amin'ny endrika endriny.
Ny sombin-tsolika dia apetraka ao anaty ingot izay notsindriana ary ho entina amin'ny hafanana ao anaty lafaoro mandoto. Ny hakitr'ireo ingot teo aloha dia tsy mahatratra afa-tsy 50% ny tena hakitroka amin'ny fanivanana. Fa aorian'ny sinteing, ny tena hakitroka dia 100%. Amin'ny alàlan'ity dingana ity dia saika mihena 70% -80% ny fandrefesana ireo ingôta ary ahena 50% ny habeny.
Ny fananana magnetika fototra dia napetraka aorian'ny fanatanterahana ny fizotry ny ota sy ny fahanterana. Ny fandrefesana lehibe indrindra ao anatin'izany ny hakitroky ny flux sisa, ny coercive ary ny vokatra angovo faran'izay betsaka dia voarakitra.
Ireo andriamby izay nandalo ny fizahana ihany no alefa amin'ny dingana manaraka, toy ny milina sy ny fanangonana.
Noho ny fihenan-tsakafo avy amin'ny fizotran'ny fanodinana dia ilaina ny fandrefesana takiana amin'ny alàlan'ny fitotoana ireo andriamby amin'ny alikaola. Diamond abrasives no ampiasaina amin'ity fizotrany ity satria mafy be ny andriamby.
Mba hifanaraka tsara amin'ny tontolo iainana izay hampiasana azy ireo dia iharan'ny karazany isan-karazany ireo andriamby fitsaboana ambony. Ny andriamby Nd-Fe-B amin'ny ankapobeny dia mora tratran'ny harafesina amin'ny fisehoana toy ny andriamby NiCuNi, Zn, Epoxy, Sn, Black Nickel.
Aorian'ny plating, ny fandrefesana mifandraika sy ny fizahana maso dia hatao mba hanamafisana ny fisehoan'ny vokatra andriamby. Ankoatr'izay, mba hahazoana antoka fa avo lenta dia mila mandinika ny habeny ihany koa isika mba hifehezana ny fandeferana.
Rehefa mahafeno fepetra ny fisehoana sy ny habe amin'ny fandeferana amin'ny andriamby, tonga ny fotoana hanaovana ny magnetization direction magnet.
Taorian'ny fizahana sy fanamafisana, ny andriamby dia vonona ny hamonosina boaty taratasy, na ny paleta hazo aza araka ny takian'ny mpanjifa. Flux andriamby dia azo atokana amin'ny vy ho an'ny rivotra na hanaterana ny fe-potoana.